japanSamachar | जापान जानकारी | विदेशीका नजरमा सन् २०२० का जापानमा महत्वपूर्ण घटनाहरु
(Japan)7th May | 2021 | Friday | 8:14:11 PM || (Nepal) 4:59:11 PM
विदेशीका नजरमा सन् २०२० का जापानमा महत्वपूर्ण घटनाहरु
POSTED ON : Saturday, 02 January, 2021 | Views : 7054
जापानको आन्तरिक विषयका चर्चा र महत्वपूर्ण घटनाक्रम सन् २०२० मा जापानीको नजरमा जे रहेको छ बिदेशी आप्रवासीको नजरमा फरक हुनसक्छ । किनभने देख्नु र भोग्नुपर्ने विषय र अवस्था जापानी र बिदेशीका लागि ठिक विपरित भईदिन्छन् । जसले गर्दा एउटै विषयको महत्व र अर्थ एकअर्कामा भिन्न पर्न जान्छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सन् २०२० मा सारा विश्व प्रभावित भयो । जापानमा संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले अपनाइएको नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी मारमा परे । जसमा गत वर्ष जापानमा विदेशीहरुलाई प्रभावित बनाउने अनेक महत्वपूर्ण विषय र घटनाक्रम भए ।
जस्तैः गैर–जापानी बालबालिकालाई विद्यालयमा जापानी भाषामा टेवा दिन बजेट बढाउने शिक्षा मन्त्रालयको घोषणा सकारात्मक रह्यो । तर यहाँका अध्यागमनमा बन्दी गृहमा बन्दीहरुमाथि दूर्व्यवहार जारी रह्यो । यस्ता अनेक कुरा छन् । यी सबैलाई यहाँ समावेश गरेर साध्य हुँदैन । आजको यस लेखमा जापाना गैर–जापानी बासिन्दाहरुलाई सबैभन्दा धेरै प्रभाव वारेका पाँच कुराहरुबारे बताउन गइरहेका छौं । जुन यस प्रकार छन्ः
१. समस्याकारी सीमा नीति
महामारीले विश्वभर सरकारको चरित्र उदांगो बनाएको छ भनेर भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला । जापानमा पनि यो समस्या छर्लङ्ग भयो । पहिलो भेदभावको शिकार भयो डाइमन्ड प्रिन्सेस क्रुज शिप । जहाजका यात्री तथा क्रुज मेम्बरलाई सरकारले गरेको वेवास्ताको विश्वभर आलोचना भयो । कतिपय देशहरु आफ्नो देशका नागरिकहरुलाई फिर्ता लगे ।
सबैभन्दा गलत व्यवहार भने गैर–जापानीहरुको लागि अप्रिलमा गरिएको सीमाबन्द थियो । कयौं विकसित देशहरुले गैर स्वदेशी बासिन्दाहरुमाथि यस्तो व्यवहार गरेका थिएनन् । तर यो मामिलामा जापानले गैर–जापानी बासिन्दाहरु माथि स्पष्ट देखिने गरी विभेद गर्यो । सरकारको यो नीतिका कारण विदेशी बासिन्दाहरु जापानमा भएको परिवारका सदस्यसँग भेट्न र बस्न पाएनन् । जागिरमा जान सकेनन् न त प्रतिबद्धताहरु नै पुरा गर्न सके । अनि सबै भन्दा दुःखको कुरा यो नीतिका कारण फर्किने अधिकार नै गुम्यो । अनि जापानमै भएकाहरुले पनि विदेशमा बिरामी भएका वा म’र्न लागेको आफन्तहरु भेट्न समेत पाएनन् ।
सरकारले मानवीय कारणका लागि केही छूट दिएपनि यसको असम्मान कार्यान्वयनका कारण मानिसहरु विभेदको शिकार भए । सरकारले सीमामा लगाएको प्रतिबन्ध विस्तारै हटाउनेबारे पुनःविचार गर्दा पनि विदेशी व्यवसायिक यात्री, पयर्टक र ओलम्पिकका लागि आउने खेलाडीहरुलाई मात्रै प्राथमिकता दिइने भयो ।
जापानको अर्थतन्त्रमा विदेशी आप्रवासीहरुको ठूलो योगदान छ । जनसंख्या बनावटमा आएको परिवर्तनसँगै भविष्यमा पनि यहाँ विदेशी आप्रवासीहरुले पुर्याउन सक्ने योगदान बढ्ने देखिएको छ । तर सन् २०२० ले जापानमा विदेशीहरुले आफ्नोपनको महसुस गर्न पाउँदैनन् भन्ने धारणा झनै बलियो पारिदिएको छ । महामारीको समयमा जापानमा स्थायी हैसियत भएका विदेशीको हैसियत पयर्टकको भन्दा बढी देखिएन ।
२. कोभिड–१९ का ‘विदेशी क्लष्टर’
जापानमा पहिलो पटक कोभिड–१९ को संक्रमित देखिँदा चीनले यसको उत्पादन गरेको भनेर प्रारम्भमा चिनियाँहरुको उछितो नै गरियो । एक राजनीतिज्ञले त यसलाई वुहान निमोनियाकै संज्ञा दिए । भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएपछि केही जापानी व्यवसायीहरुले गैर–जापानी ग्राहकहरुमाथि नै प्रतिबन्ध लगाए ।
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा केही घटनामा भने विदेशी संक्रमितको समूह नै फेला परे । यहाँबाट अवस्था झनै जटिल भयो । सरकारको एक समितिले विदेशी कामदारका लागि प्रभावकारी रुपमा र चिन्ता देखाउँदै सन्देश प्रवाह गर्यो । तर संस्कृतिक विविधताप्रति उनीहरुको इशारालाई भने जापानी सञ्चार माध्यमहरुले गलत तरिकाले व्याख्या गरे । सञ्चार गृहहरुले विदेशीहरु सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताका कारण निकट क्वार्टरमा सँगै बस्ने भएकोले उनीहरुमा सामूहिक संक्रमण फैलिएको भन्ने अवधारणामा बढी ध्यान दिए । यो कुरा पनि केही साँचो हो । तर उनीहरु यसरी बस्न बाध्य हुनुको कारण भने न्यून तलब पनि थियो ।
जापानमा विदेशीहरुले मास्क लगाउन मान्दैनन् वा सामाजिक दूरीको पालना गदैनन् भन्ने कुरा असत्य हो भनेर द जापान टाइम्समा एक नेपाली बासिन्दाले औंल्याएका थिए । सरकारले राम्रो नियतले लिएको नीतिलाई सञ्चार माध्यमहरुले सन्सनीखेज बनाउनु लज्जास्पद कुरो हो ।
३. खेलकूद जगतमा मिश्रीत सन्देश
जापानी–हैटीयन–अमेरिकी मूलकी टेनिश खेलाडी नाओमी ओासका इतिहासमै सबैभन्दा धेरै कमाउने महिला खेलाडी बनिन् । ओसाकाले ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर आन्दोलनमा सहभागी भइन् ।
ओसाकाले जापानमा अन्य अल्पसंख्यक समूहको लागि बोलिनन् । तर इरानी मूलका जापानी बेसबल खेलाडी यु दार्भिश र बेनिनिज मूलका जापानी हूपष्टर रुई हाचिमुरासँग मिलेर खेलाडीहरुले सामाजिक न्याय सम्बन्धी सवालहरुमा चुक्क बोल्नु हुन्न खेल्नु मात्रै पर्छ भन्ने मनोवृत्तिलाई धक्का भने दिए । अन्य खेल संगठनहरुले भने यसप्रति देखाएको प्रतिक्रियाले जापानको सोचाइ छर्लङ्गै बनाएको छ ।
४. नाइकीले ल्याएको विविधता
नाइकीको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने यो बाल श्रममा मुछिएको छ । तर यही नाइकीले जापानमा एक विज्ञापनमा सामान बेच्न दुई गैर–जापानी आवासीय बालकहरुको प्रयोग गर्यो । यसले जापानमा अल्पसंख्यक समूहसँग सम्बन्धी सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्यो । यो राम्रो कुरा पनि हो ।
जापानमा यस्ता बालबालिकाहरुको अस्तित्व छ र रंगभेदको समस्यालाई वेवास्ता गरिनु हुन्न भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । तर दुःखको कुरा सामाजिक सञ्जालहरुले जेनोफोबिक प्रतिक्रियाहरुमा चाहिने भन्दा बढ्ता ध्यान दिएर यो कुरालाई खापा लगाए । तैपनि, राम्रो कुरा के भयो भने जापान रंगभेदको समस्या नै नभएको ठूलो सजातीय परिवार हो भन्ने कथनप्रति विज्ञापनले झापड हानेको छ । यस्तो पक्षपातको शिकार भएका बच्चाहरु स्टार खेलाडी हुन्छन् भनेर विज्ञापनले देखाउनु भने दुःखको कुरा हो ।
५. ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर
अमेरिकाको मिनियापोलिस शहरमा स्वेत प्रहरीको क्रुरताका कारण काला जातीका जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएपछि अमेरिकामा ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर आन्दोलन चर्कियो ।यसको प्रभाव यूरोप र एशियाली देशमा पनि पर्यो । यो प्रभाव जापानमा पनि देखियो । जापानी संघ संस्थाहरुले पनि ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर आन्दोलन गरे । यस्ता प्रदर्शनमा केही गैर–जापानीहरुको पनि संलग्नता थियो ।
अमेरिका भइरहेको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जापानमा मार्चमा टोकियो च्याप्टर अफ ब्ल्याक लाइभ्स म्याटरले छुट्टै प्रदर्शनको आयोजना गर्यो । जापानी सञ्चार माध्यमहरुले अमेरिका र घरेलु स्तरमा भएका प्रदर्शनहरुबारे खासै प्रचार प्रसार गरेनन् । एनएचकेले रंगभेदी एनिमेशन कार्टुन देखाएपछि चर्को आलोचना भयो । पछि एनएचकेले यसबारे माफी नै माग्यो । अल्पसंख्यक समूहको पक्षमा लडाई प्रतिको रुची जापानमा सन् २०२१ थप बढ्ने छ भन्ने आशा गरौं । जापानमा जातिय विविधता नभएकोले यहाँ रंगभेदसँग सम्बन्धित पक्षपात हुँदैन भनेर जापानमा बहुसंख्यक मानिसहरुले बताउँदै आएका छन् । तर एनएचकेको कार्टुनले जापानमा रंगभेदलाई उजागर गरेकोमा दुईमत छैन ।